B2B နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် B2013B စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ Martech Zone
စားသုံးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောသောအခါ B2C ကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသလားဟုသူတို့သည်အမြဲမေးမြန်းလေ့ရှိသည်။ B2B ကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် B2B ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့လားဟုမေးကြသည်။ ရိုးသားမှုအရမဟာဗျူဟာများသည်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့သည်အရေအတွက်နှင့် ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကွဲပြားသည်။ သို့သော် ၀ ယ်သူတစ် ဦး လျှင်အမြတ်နှင့်ကွဲပြားမှုကိုတွေ့ရသည်။ B2C ကုမ္ပဏီများသည်အလွန်မြင့်မားသောပမာဏနှင့်ဝယ်ယူမှုအတွက် ၀ င်ငွေနိမ့်ကျမှုကို ဦး တည်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသော ၀ ယ်လိုအားလိုအပ်သည်။ B2B အတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ပို၍ စျေးကြီးလွန်းပြီး ပို၍ နိမ့်သည်။ ဆက်စပ်မှုမြင့်သောနံပါတ်များသည်အဓိကဖြစ်သည်။
ငါ B2B စျေးကွက်သမားတော်တော်များများကအွန်လိုင်းစျေးကွက်ကသူတို့အတွက်တကယ်အကူအညီဖြစ်စေမလားဆိုတာတွေးမိသည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကအွန်လိုင်းဖိုရမ်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုသတိရမိသည်။ သတင်းစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော sensitivity နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအတွက် Proximity Sensors ကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်းကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျိုးပဲ့နေသောအာရုံခံကိရိယာများကိုအစားထိုးရန်မလိုအပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာထောင်သောင်းချီသောငွေများကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဒါက B20B ဖြစ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်း။
ယခုတွင်၎င်းသည်ရိုးရိုးဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အာရုံခံကိရိယာထုတ်လုပ်သူ ၁,၅၀၀ ကျော်၊ ၄ င်းတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ၎င်းတို့ကိုရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် B1,500B ပါဝင်သည်။ နေရာတိုင်းမှာပါ။ ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လေးနက်သောဒေါ်လာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေ့ရှိပြီး ၀ ယ်ယူရေးအရာရှိများနှင့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များကမူဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အရောင်းဝန်ထမ်းအားဖုန်းခေါ်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမပြုပါ။ မကြာခဏဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအချိန်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည် အလားအလာကိုသင်ခေါ်ဆိုသည်!
GetAm Ambassadorစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လွှဲပြောင်းမှုစနစ်သည်၎င်းမှရရှိသောဒေတာများမှ B2B အွန်လိုင်းစျေးကွက်မဟာဗျူဟာများပေါ်တွင်ဤအချက်အလက်အချက်အလက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ BtoBOnline နှင့် TopRankBlog.
Tags: b2bb2b အကြောင်းအရာb2b အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးb2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
Curata - သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရွေးချယ်ပါ။